Shirkadda diyaaradaha Boeing oo lagu dacweeyay Maxkamad ku taal dalka Maraykanka – Radio Daljir
Shirkadda diyaaradaha Boeing oo lagu dacweeyay Maxkamad ku taal dalka Maraykanka
Maarso 30, 2019 5:24 b 0
Qaar ka mid ah qoysaska dadkii ku dhintey burburkii diyaarad ay lahayd shirkadda Ethiopian Airlines ee nooceedu ahaa Boeing 737 ayaa shirkadda Boeing ku dacweeyay maxkamada federalka ee dalka Maraykanka.
Dad gaaraya 157 ruux ayaa ku dhintey burburka diyaaradan iyadoo dadka ku dhinteyna ay ka soo kala jeedeen inkabadan soddon wadan.
Hase yeeshee, ehelada Jaksan Musoni oo ka mid ah dadki shilka diyaaradeed ku geeriyooday ayaa waxay dacwad ku soo oogeen shirkadda Boeing, iyaga oo dacwadooda ku sheegay in diyaaradda burburtay ee Boeing 737 Max 8 uu ka khaldanaa habka duuliyaha kumbuyuutarka, taasina ay sababtay inuu shilka dhaco.
Shilkan oo dhacay shan bilood ka dib markii ay burburtay diyaaraddii laga lahaa Indonesia oo iyaduna nooceedu ahaa Boeing 737 ayaa horseeday in gabi ahaanba duullimaadyada laga joojiyey diyaaradaha nooca burburay ah.
Shirkadda Boeing ee diyaaradda burburtay sameysay ayaan ilaa iyo hadda wax jawaab ah ka bixinin dacwadda lagu soo oogayna.
Toddobaadkan ayay shirkadda Boeing sheegtay in qayb ka mid ah diyaaradda ay cillad ku arkeen, cilladdii jirtayna ay xal u heleen.
Tahribayaal laga badbaadiyeey xeebaha Taliyaaniga
Madaxweynaha Puntland oo gaaray Carmo